June 16, 2019 June 16, 2019 by साहारा संदेश
मान्छेको नाम कुकुर-कुकुर्नी भनेकाे सुन्दा सबै लाई एकछिन अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मानुपर्दैन। यही कुकुर र कुकुर्नी नामबाट चिनिन्छन। ढोरपाटन नगरपालिका वडा ८ बोबाङ्ग गाउँका कुकुर्नी कामी र कुकुरे कामी अहिले पनि। आमा कुकुर्नी र बाबु कुकुरे भनेर गाउँलेहरुले बोलाउँदा छोराछोरीलाई कति पनि अचम्म लाग्दैन।
छोराछोरीलाई अचम्म र दुख लागेर के गर्नु? उनीहरुलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन दिइएको नागरिकतामै कुकुरे र कुकुर्नी नाम लेखिए पछि! गाउँ घरमा विवाह, चाडपर्व सबै मेला पर्वहरुमा उनीहरुलाई यही नामबाट बोलाउँदा आफुहरुको नाम अरुले थाहा पाउँछन् कि भनेर निकै दुख लाग्ने गरेको कुकुर्नी कामीले बताइन। उनलाई सबै भन्दा चिन्ता त छोराछोरीको नागरिकतामा बाबु आमाको नाम लेख्दा कुकुर्नी भनेर लेखिनेमा छ।
गाउँभरी नै यस्तै नाम
सच्याउन सकिन्छ नागरिकता: सिडियो बाग्लुङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले दलित समुदायलाई हिनताबोध हुने गरी जारी भएका नागरिकता सच्याउन सकिने बताएका छन। दलित समुदायलाई थप विभेद गर्ने नाम थर रहेका व्यक्तिहरुले सच्याउन चाहे प्रशासनले सच्याएर नागरिकता बनाई दिने क्षेत्रीले बताउँछन।
हामीले त्यस्ता गाली गलौज गरी बनाईएको नागरिकताको नाम थर अन्य स्थानीयमा पनि पाईएकोले सच्चाई दिएका छौं, उहाँहरुले पनि सच्याउन चाहे हामी सच्याइ दिनेछौं। ’
Prevजसले धेरै गीत सुन्छ, उसैको बढि यौन शक्ति
Nextधनी बन्ने सजिलो उपाय हेर्नुहोस- आफ्नो भाग्य चम्काउनुहोस